ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » အဘယ်အရာကိုအမျိုးသမီးများနေ့တကယ်ပဲ Want?
အားဖြင့် ထိုသို့ဒါဝိဒ်သည် Shade
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဇူလိုင်. 08 2020 |5မိဖတ်ပြီးသား
သင်သည်အမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုမေးမြန်းလျှင်သူမစေချင်တာတွေ, သူမကသူတစ်ဦးသည်လူအတွက်စေချင်တာတွေကိုဖော်ပြရန်ရန်ကြိုးစားခြင်းဖြင့်ပြန်ပို့ပေးလိမ့်မယ်. ထိုမိန်းမသည်အများအားဖြင့်ဒုက္ခကြောင်းဖော်ပြခြင်းရှိပါတယ်. သူမသည်ပင်ကသူမတကယ်လိုအပ်ပါတယ်သည်အဘယ်အရာကိုဖော်ပြရန်စတင်ဖို့နိုင်ဘူး.
သင်ဂရုတစိုက်ဆက်ဆံရေးကိုရှိအမျိုးသမီးများစောင့်ရှောက်သည့်အခါ, အချို့သောဆက်ဆံရေးကိုအခြားသူများထက်ပိုမိုပြည့်စုံရာနဲ့အောင်မြင်တဲ့ဖြစ်ကြောင်းကိုသင်ရှာတွေ့. အောင်မြင်စွာဆက်ဆံရေးကို, ထိုမိန်းမသည်မိမိလိုအပ်ပါတယ်သမျှသောအမှုအရာတို့ကိုလာပြီဖြစ်ပါတယ်. ကျေပွန်ကြသည်မဟုတ်သောဆက်ဆံရေး, အမျိုးသမီး၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်တွေထဲကတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုတွေ့ဆုံခဲ့သည်ခံရကြသည်မဟုတ်.
သင်ဂရုတစိုက်ပြင်ပသူတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ရေး၏သွားသောအမျိုးသမီးစောင့်ရှောက်သည့်အခါ, သူတို့မင်္ဂလာဆောင်အတွက်ပျောက်ဆုံးနေကြောင်းသောအရာရယူဖြစ်ကြောင်းသင်တွေ့. ဥပမာအားဖြင့်, လိင်ပျင်းစရာကောင်းနေပါလျှင်, သူမစိတ်လှုပ်ရှားစရာကိုနှစ်သက်ပါလိမ့်မယ်. အိမ်ထောင်ရေးတွင်လိင်ကိုနှစ်သက်လက်ခံမယ်ဆိုရင်, ဒါပေမယ့်သူမကသူရိုသေလေးစားမှုနဲ့ကုသခံရမဟုတ်ကြောင်းခံစားရ, သူမရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူသူမ၏ဆက်ဆံပါလိမ့်မည်သူတစ်ဦးကိုတွေ့လိမ့်မည်. အမျိုးသမီးများပြင်ပသူတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးသွားသည့်အခါ, သူတို့တွေ့ဆုံသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေထဲကတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုရှိသည်ရှာဖွေနေပါသည်. အချို့သောမိန်းမတို့သည်, သူကသူမ၏တွေ့တယ်လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးရနိုင်ဖို့အတွက်နှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောယောက်ျားကြာလျှင်, သူမကပြုပါလိမ့်မယ်.
စိတ်ဝင်စားစရာ, ကိစ္စတော်တော်များများအတွက်, မိန်းမများဟာသူတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးပြင်ပမှာသွားမရှာခဲ့ပါ. သူတို့ကသာသူတို့မပျော်ခဲ့ကြသည်ကိုသိ. သူတို့ဟာအခြားအမျိုးသားများမှတိုးတက်လာဖို့ဖြစ်ပေါ်နိုင်ဖြစ်လာပြီးနောက်၎င်းကိုနှင့်အတူလိုက်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့.
အမျိုးသမီးအများစု, သူမလုံးကိုသူမ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်လာပြီဆိုရင်, သူမလုံးဝယောက်ျားသည်စွန့်နှင့်သူမ၏ဖြည့်ဆည်းနိုင်သူတစ်ဦးသည်လူအဘို့အကြည့်ရှုမည်. သို့သော်သူမသည်သူအားလုံးသူမ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့သိရပါဘူး, သူမသာသူမကြိုက်ပါဘူးဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်. အဘယ်သို့သောအမှုအရာသိတယ်.
အမျိုးသမီးများကမသိစေခြင်းငှါ, ထိုသူတို့၏အများဆုံးဆက်ဆက်ကတို့အကြားမနိုင်, ဒါပေမယ့်အမျိုးသမီးတွေပြည့်စုံမည်နိုင်ရန်အတွက်အရာလေးပါးလိုအပ်ပါတယ်.
ပဌမ, သူမကသူဖြစ်သည်ဟူသောထူးခြားတဲ့လူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်အတန်ဖိုးထားခံစားရရန်လိုအပ်သည်. သူမသည်အထူးခံစားရန်လိုအပ်သည်, မည်သည့်အခြားအမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်မတူ. ထိုမိန်းမငယ်သည်သူမ၏ယောက်ျားသူမ၏ရစေရန်အတွက်သူမ၏ထောက်ခံပါတယ်သိရန်လိုအပ်သည်.
ဒုတိယ, သူမနက်သောရင်းနှီးသောစိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှုခံစားရရန်လိုအပ်ပါတယ်. သူမသည်သူမ၏ယောက်ျားနှင့်အတူကြောင့်စိတ်ခံစားမှုနွေးထွေးမှုရှိသည်ရန်လိုအပ်သည်. ဒါဟာသူမသာသူနှင့်အတူမျှဝေ connection တစ်ခုင်.
တတိယ, သူမကတစ်ဦးသောမိန်းမကဲ့သို့ခံစားရရန်လိုအပ်ပါတယ်. သူမသည်အဆင်းလှခံစားရန်လိုအပ်သည်, sexy, နှင့်ဣတ္. သူမသည်အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူကြွလာသောသူအပေါင်းတို့သည်အမှုအရာပျော်မွေ့ရန်လိုအပ်ပါတယ်.
နှင့်နောက်ဆုံးတွင်, သူမပူအသည်းအသန်လိင်လိုအပ်ပါတယ်. သူမသည်ဖြားယောင်းခံရရန်လိုအပ်သည်, စွဲမက်, ကျီစား, ဝ, ထပ်ခါထပ်ခါ. သူမသည်အသစ်သောအရာကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်လိုအပ်ပါတယ်, နည်းလမ်းသစ်တွေအတွက်, စိတ်ကူးယဉ်နှင့်အခန်းကဏ္ဍအပါအဝင်. ဒါဟာသူမအသက်ရှင်လျှက်ခံစားရစေတယ်.
သူမကသူနှင့်အတူအရာအားလုံးရှိတယ်တဲ့လူနှင့်အတူယခုအခါအမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်အများဆုံးပြည့်စုံသည်, သူမသည်အကြောင်းလှသောအရူးသောလူနှင့်အတူယခုအခါ. သို့သော်ထိုခဲယဉ်းဖြစ်ပျက်. အများအားဖြင့်, တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောအမှုအရာပျောက်ဆုံးနေ.
အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်သူမ၏အသက်တာတွင်အတူရှိခဲ့ပွီးသောအမျိုးမျိုးသောယောက်ျားမှာကြည့်ကြစို့. အမျိုးမျိုးသောလူတို့သည်လိုအပ်ချက်များကိုအချို့ကိုတွေ့ဆုံခဲ့, ထိုသူတို့အလုံးမဟုတ်.
အဆိုပါ Bad Boy
ဥပမာအားဖြင့်, ရဲ့အားလုံးကျော်ကြားဂန္ထဝင်မကောင်းတဲ့ယောက်ျားလေးကိုယူပါစေ. မကောင်းတဲ့ကောင်လေးကသူမ၏စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့လိင်ပေးသည်. ထိုအသူသည်အလွန်ပုလ္သောကြောင့်,, သူသည်မိမိကို sexy ခံစားရစေတယ်. ဒါပေမယ့်သူကသူ့အပေါ် cheats သူတစ်ဦးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်စုပ်ယူလူရှုပ်များဖြစ်ပါသည်. သူမသည်နားလည်တန်ဖိုးထားမခံစားရဘူး, သူသည်ဖြစ်နိုင်မဆိုစိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှုခံစားနိုင်ဘူး. လိင်ဒါသည်ကောင်းသောသူသည်ဒါအလွန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားရကြောင့်သူမသည်မကြာခဏသူ့ကိုစွဲဖြစ်လာ. သူမသည်သူ့ကိုယဉ်ဖို့အချည်းနှီးကြိုးစားပါလိမ့်မည်, ဒါပေမယ့် fruitless ဖြစ်ပါသည်. တစ်ဦးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြိုကွဲအတွက်, နောက်ဆုံးတွင်သူသည်ကောင်းကျိုးကိုသူ့ကိုအရွက်. အနည်းဆုံးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အထင်ကြီးမြင့်မားသောမိန်းမနောက်ဆုံးတော့ကောင်းဘို့သူ့ကိုအရွက်.
အဆိုပါ Nice Guy
ထိုအခါဂန္ wimp ကောင်းတဲ့ကောင်လေးရှိမယ့်. သူကသူမ၏တန်ဖိုးထားခံစားစေတယ်, သူနှင့်အတူတစ်စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှုတည်ထောင်နိုင်ရန်တတ်နိုင်. ကံမကောင်းစွာသော်လည်း, သူပါတ်သတ်ဆက်နွယ်င်, သို့မဟုတ်သူပုလ္မယ်, ဒါကြောင့်သူမကို sexy မခံစားရဘူးနဲ့ sex အကြောင်းပေါ်လှည့်မခံစားရဘူး. သူမသည်သူ့ကိုလက်ထပ်ဖို့ကိုချစ်ချင်ပါတယ်, သူကမိသားစုများအတွက်စုံလင်ခြင်းရှိင့်ကြောင့်ဆိုသော်, ဒါပေမယ့်သူမကစောင့်ရှောက်အချို့သောအကြောင်းပြချက်များအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု delay လုပ်ခြင်း. သူသူမကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသတ္တဝါအပေါင်းတို့ကိုတူတယ်လို့ခံစားမိစေပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာင်.
အဆိုပါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Unavailable Guy
သူမကစံပြဆက်ဆံရေးရစေခြင်းငှါ, အနီးဆုံးကိုစိတ်လှုပ်ရှားမှုအမရနိုင်ကောင်လေးသည်. သူကတစ်ဦး wimp မယ်, သူသည်လူရှုပ်မယ်. သူကပုလ္ဖြစ်နှင့်သူမ၏ကောင်းလိင်ချီးမွမ်းစေခြင်းငှါ. သူကလူကြီးလူကောင်းဖြစ်နှင့်သူမ၏အလွန်တန်ဖိုးထားခံစားစေခြင်းငှါ. သို့သော်ပျောက်ဆုံးနေတစ်အရေးကြီးသောအရာတစုံတခုရှိင်. သူဟာစိတ်ပိုင်းရရှိနိုင်မယ့်. သူမသည်သူ့အားစိတ်ခံစားမှုနှင့်ချိတ်ဆက်ခံစားရဘယ်တော့မှမ. ဒီဖြစ်ကောင်းအမျိုးသမီးတွေကိုရှိသည်အကြီးမားဆုံးတိုင်ကြားစာဖြစ်ပါတယ်. သူမသည်သူအပေါင်းတို့သည်အဖက်ဖက်တွင်စံနမူနာကောင်လေးတွေ့ရှိ, ဒါပေမယ့်သူကပြောတယ်, သူစိတ်ခံစားမှုရရှိနိုင်မယ့်. သူမသည်သူ့ကိုသူမတံခါးဖွင့်ဖို့ထပ်ခါထပ်ခါကြိုးစား, ဒါပေမယ့်ဖြစ်ပျက်ဘယ်တော့မှမ. အမျိုးသမီးများစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသတ္တဝါတွေ, သူတို့ကလိုအပ်, ဒါကြောင့်သူမနောက်ဆုံးတွင်အရွက်.
အဆိုပါ Gay ကမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်း
သူမ၏အသက်တာ၌အခြားအမျိုးသားများရှိပါတယ်. သူမ၏ဂေးမိတ်ဆွေရှိပါတယ်. သူသည်မိမိကို sexy ခံစားရကိုသူတကယ်သူမ၏တန်ဖိုးထားခံစားစေတယ်ကြောင့်သူမသည်သူနှင့်အတူထွက်ဆွဲထားကိုချစ်သောသူ. သူမသည်သူနှင့်အတူဘုံ၌စာရေးတံရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်သူကပြောတယ်, သူလိင်တူချင်းင်, ဤသို့မ Option တစ်ခု.
ထို့နောက်ရံဖန်ရံခါလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ကိုနှစ်သက်ရှိပါတယ်. အကြောင်းရင်းများစွာအဘို့အလို့သူမကအစဉ်အဆက်ဘယ်အရာကိုမဆိုအလေးအနက်ထားသူ့ကိုစဉ်းစားဘယ်တော့မှမဖွင့်, ဒါပေမယ့်သူကပြောတယ်, လိင်သည်ကောင်း၏. တိုင်းလအနည်းငယ်ပြီးတာနဲ့, သူမအမှုအရာသည်သူ့အဘို့လုပ်နေတယ်ဘယ်လိုအတူပျင်းသောအခါ, သူမသူ့ကိုထခေါ်တစ်ချက်အဘို့အကူးသွားပါလိမ့်မယ်, နှင့်တဦးအရာသာ. လိင်များအတွက်. ပြီးတော့သူမကသူကိုမကြာမီစံပြလူကိုတွေ့လိမ့်မည်မျှော်လင့်ထားကြောင်းအရွက်.
နှင့်နောက်ဆုံးတွင်, တဦးတည်းနောက်ဆုံးဥပမာအဖြစ်, အိမ်ထောင်သည်သောသူတယောက်မျှမရှိင်. သာနိမ့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အထင်ကြီးအမျိုးသမီးများကိုယ့်ကိုယ်တစ်ဦးအမြှောင်ဖြစ်လာစေရန်ခွင့်ပြု, သို့မဟုတ်အခြားစကားများတွင်, သူမရှိသည်မဟုတ်နိုင်သလဲဆိုတာလိုသူအမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်. သူကသူမ၏စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့လိင်ပေးသည်, သူသည်မိမိကို sexy ခံစားရစေတယ်, သူတို့တစ်တွေနက်ရှိုင်းသောစိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှုများကိုမျှဝေ. ဒါပေမဲ့သူသည်မိမိမယားနှင့်မခွါစေမည်. ဒါကြောင့်သူမကိုအထူးမခံစားရဘူး. ထိုမိန်းမသည်နိမ့်ကျကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အထင်ကြီးဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်, သူမ၏မှထွက်ခွာရန်အဘို့အလွန်ခက်ခဲသည်.
ဒါကြောင့်, သူတို့အားသူမ၏အသက်တာ၌ယောက်ျား၏ပုံသက်သေဖြစ်ကြ၏. သင်မြင်သည့်အတိုင်း, သူမ၏လိုအပ်ချက်တွေထဲကတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုတစ်ခုချင်းစီဥပမာမှာတွေ့ဆုံခဲ့ခံရကြသည်မဟုတ်. သူမကိုအလွယ်တကူသူမ၏လိုအပ်ချက်များအားလုံးတွေ့ဆုံခဲ့သူတစ်ဦးသည်လူကိုခရီးဦးကြိုနိုင်လျှင်သို့သော်စဉ်းစားကြည့်ပါ. သူမ၏တန်ဖိုးထားခံစားဖန်ဆင်းတော်မူသောသူတစ်ဦး. သူနှင့်အတူနက်ရှိုင်းတဲ့အစွမ်းထက်စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှုပင်မဟုတ်ပါလားသောသူသည်. သူမ၏ဣတ္နှင့် womanly နှင့် sexy ခံစားသောသူတစ်ဦးကလူကို. သူမ၏ပူအသည်းအသန်လိင်ကိုခံသောသူသည်. ထိုကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်ရလိမ့်မည်.
ဒါက Master Lover ဖြစ်ပါသည်. သူကခိုင်သေးနူးညံ့သိမ်မွေ့သည်. ရိုးဖြောင့်သေးသောလိမ္မာပါးနပ်မှု. ပုလ္သေးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ. ပြတ်သားသေးကွေးညွှတ်. ရည်မှန်းချက်သေးအလိုအလျောက် oriented. ပေးကမ်းခြင်းသည်သေး Driven. Dominic သေးစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာ. ထိုမိန်းမ၏သားရိုင်းအော်ဟစ်ခံစားရတဲ့ orgasms ပေးသည်.
၎င်းသည်ပြီးခဲ့သည့်အဘို့အကြှနျုပျ၏သုတေသန၏အာရုံဖြစ်ရဲ့ 15 နှစ်ပေါင်း, ငါ၏စာအုပ်အပေါ်မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်, “ထိုသို့ဒါဝိဒ်သည် Shade ရဲ့ Master Lover လက်စွဲ။” သင်သည်ငါ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်စာအုပ်အကြောင်းကိုပိုမိုဖတ်ရှုနိုင်.